Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe kaKhozi e-Earthology Retreat Center - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe kaKhozi e-Earthology Retreat Center
Viroqua, Wisconsin, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Craig
U-Craig Ungumbungazi ovelele
I-Earthology Retreat Centre ingamahektha angu-30 ehlane le-Driftless Region elisesigodini sase-Maple Dale, ibanga nje lokuhamba ukusuka kwezinye zezindawo ezidotshwa kahle kakhulu zama-trout kule ndawo, futhi iqhele ngamakhilomitha amabili ukusuka edolobheni lase-Viroqua. Sinamakhabethe amabili anamandla elanga futhi aklanywe ngokwemvelo azungezwe ehlathini axhumene namamayela amabili emizila yangasese yokuhamba izintaba egudla umfula kanye nasesigodini.
I-Eagle's Nest Cabin ihlezi phezulu onqenqemeni olubheke esigodini sethu esizimele esinezihlahla. Indawo yokupaka iseduze nekhabhini. Ingaphakathi lale khabhinethi elakhelwe imvelo lihlanganisa igumbi lokuphumula elinomatilasi we-queen spring futon. Izitebhisi ezimbili nhlangothi zombili zegumbi lokuhlala ziholela kumagumbi okulala amabili amancane ahlukene, ngalinye linomatilasi abangamawele anegwebu lenkumbulo. Zonke izingubo zokulala zifakiwe. Ikhishi linosinki, izitsha, amabhodwe, amapani, izinto zesiliva, amathawula asekhishini, i-butane powered burner eyodwa kanye nefriji elingana nendawo yokulala. Indlu yokugezela nekhishi kokubili kunamanzi agelezayo. Indlu yokugezela inosinki, indlu yangasese, ishawa namathawula athambile kakhulu. Kukhona i-heater yamanzi kanye ne-heater yesikhala kanye nesiphephetha-moya nesiphephetha-moya (ayikho i-AC). Kukhona netafula eligoqwayo nezihlalo ezigoqwayo ongazisebenzisa uma udla. Ngaphandle kwekhabhinethi kukhona umpheme omboziwe omboziwe, igrill yamalahle kanye nomgodi womlilo. Izinkuni zingathengwa yi-bundle onsite. Ikhabethe elinamandla elanga lixhumeke kumamayela amabili emizila yangasese yokuhamba ngezinyawo endaweni enqamula esigodini, emfudlaneni nasehlathini. Uma uvakashele neqembu elikhudlwana, sineKhabhinethi lethu elincane lase-Hillside elitholakalayo ukuze liqashwe futhi uqwale amatende ezansi nomfula (sicela uhlole nathi ngamanani nokutholakala kusenesikhathi).
4.93 · 90 okushiwo abanye
I-Earthology Retreat Centre itholakala kuMgwaqo we-Maple Dale obukeka kahle ngamamayela amabili nje ukusuka edolobheni elihle i-Viroqua kanye nokuqwala izinyawo okungaphansi kwengxenye yemayela ukusuka kumakhulu amahektha omhlaba we-DNR kanye nokunye okuhamba phambili kokudoba ama-trout kule ndawo.
UCraig Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Viroqua namaphethelo